U-Clicky wethula igajethi yeGoogle | Martech Zone
U-Clicky wethula i-Google Gadget
NgoLwesihlanu, Okthoba 5, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Uma ubufunda ibhulogi yami isikhashana, uyazi ukuthi ngiyi- fan omkhulu weClicky Web Analytics. Kumane nje kuyisimangaliso, isisindo esincane, no-umbhedo uhlelo lweWebhu Analytics oluhle kakhulu kubhulogi. Ngiyithande kakhulu kangangoba ngaze ngabhalela i-WordPress plugin yayo!
Manje kuza ideshibhodi ye-iGoogle Clicky kaScott Falkingham kusuka Umqondo Onelukuluku:
Thatha konke ukusebenza kwe Clicky bese uyifaka kuGadget enhle! Hewu! Akudingeki ukuthi usebenzise i-Google Gadget ekhasini lakho le-iGoogle, futhi. Ama-Google Gadgets angabekwa noma kuphi ngethegi yeskripthi encane ecocekile. Ngiyithandile igajethi kangangoba ngivuselele i-plugin yeWordPress ngiyithumele kuSean! Sethemba ukuthi uzokhipha i-plugin entsha ye-Admin ne-Gadget eshumekiwe!
Ukuthola igajethi, iya ekubhaliseni nayo Clicky. Ungalanda igajethi kuGoogle kanye ne-plugin ye-WordPress ekhasini lezinto ezinhle.
Tags: UDavid Siteman GarlandOkusheshayo OkushibhileUkunyuka kuya phezuluUkumaketha kwe-Twitter
I-PHP ne-MySQL: Khipha Umbuzo kufayela Elinqunyelwe Ithebhu
I-Oct 5, i-2007 ku-11: i-44 PM
Ngiyakuthanda okuchofozekile, ngisanda kukufaka kubhulogi lami futhi ngiyasithanda kakhulu isikhombimsebenzisi somsebenzisi namamethrikhi awasebenzisayo. Ngiyithanda kakhulu i-Google Analytics, ngicabanga ikakhulu ngenxa yendlela ethula ngayo imininingwane ngendlela iGoogle Analytics eyenzayo ngayo.
Ngisenakho kokubili kusayithi lami uma kwenzeka ngiguqula umqondo wami noma iGoogle ithuthukisa amamethrikhi futhi ngifuna idatha yokuqhathanisa.
Okthoba 6, 2007 ngo-6: 12 AM
Ngicabanga ukuthi yilokho engikuthanda kakhulu futhi, Dustin! Ngiphinde ngigcine i-Google Analytics nxazonke - ngithanda amakhono we-graphing - ikakhulukazi ikhono lokwenza ukuhlaziywa kokuqhathanisa ngezikhathi ezithile. I-graphing-based graphing inembile impela.
Enye yezinto ezenziwa nguClicky okushaya i-GA ngaphandle kwamanzi yikhono lokulandela ukulandwa. Njengoba ngivame ukubeka izibonelo kusayithi lami, kuyisici esihle kimi ukusibuka!
I-Oct 8, i-2007 ku-9: i-53 PM
Ngingumfana omkhulu we-Clicky. Ngingayithanda kakhulu uma ngandlela thile okuthunyelwe okudumile kungakhiqizwa kusuka ngokuchofoza ukuze kuboniswe kusayithi - ifa le-css.
Angisiyo ikhowudi, kepha ngingathanda uma othile engenza lokhu * ukusikisela okuncane *